Maxay yihiin labada arrin ee Farmaajo uu ka sheegay shirka Midowga AFRIKA? - Caasimada Online
Home Warar Maxay yihiin labada arrin ee Farmaajo uu ka sheegay shirka Midowga AFRIKA?
Maxay yihiin labada arrin ee Farmaajo uu ka sheegay shirka Midowga AFRIKA?
Addis Ababa (Caasimada Online) – Madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday, Mudane Maxamed Cabdullahi Maxamed (Farmaajo|) oo ku sugan caasimada Itoobiya ee Addis Ababa ayaa khudbad ka jeediyey fadhiga uu yeeshay Golaha Nabadda & Ammaanka ee Midowga Afrika.
Farmaajo ayaa khudbaddiisa diiradda ku saaray laba arrimood oo kala ah dagaalka Al-Shabaab iyo qorshaha ciidamada Soomaaliya ay kula wareegayaan amniga guud ee dalka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa shaaca ka qaaday in guullo waa weyn laga gaaray la dagaalanka Al-Shabaab, sidoo kalena ay dowladdu u diyaar garowday amniga dalka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qayb galaya Meertada 35-aad ee Shir-madexeedka Midowga Afrika ayaa khudbad ka jeediyey fadhi uu Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee Midowga Afrika ku soo bandhigayey warbixin ku saabsan xaaladda guud ee nabadda iyo amniga Qaaradda Afrika.
Madaxweynaha oo ka warbixiyey guulaha la taaban karo ee ay Dowladda federaalka Soomaaliya ka xaqiijisay la dagaallanka argagixisada iyo nabad kusoo dabbaalidda Dalka, ayaa xusay muhiimadda ay qaaraddeenna u leedahay in meel looga soo wada jeesto dabargoynta arxanlaaweyaasha Al-Shabaab iyo ururrada kale ee argagixisada ah.
“Argagixisada Al-Shabaab waxa ay khatar ku tahay dhammaan nolosha dadka Qaaradda Afrika. Qorsheyaasha Golaha Nabadda iyo Ammaanku waa in ay noqdaan kuwo midaynaya dhammaan dadaallada iyo cududda aan kaga hortegayno khataraha inagaga imaanaya argagixisada Alshabaab iyo kooxaha kale ee xagjiriinta ah.”
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in dowladda Federaalka Soomaliya ay ka go’an tahay la wareegidda masuuliyadda amnigeeda qaran, waxa uuna hoosta ka xarriiqay in ay si buuxda ugu diyaar garoobeen fulinta heshiiskii ay dowladda Soomaaliya iyo Golaha Nabadda iyo Ammaanku gaareen Bishii koowaad ee sannadkan, kaas oo jeexayey dhabbaha la wareegidda amniga oo ku qotoma hagitaannada iyo jihaynta ka soo fula dowladda Soomaaliya.
“Soomaaliya waxa ay sannadihii la soo dhaafay ku tallaabsatay horumar ballaaran oo dhanka amniga, dib-u-dhiska ciidanka iyo wiiqidda awoodda argagixisada Al-Shabaab, waxa ayna taasi keentay in soomaaliya ay hadda soo gaartay xilligii ay si buuxda u la wareegi lahayd masuuliyadda amnigeeda qaran.”
Shirka oo ilaa berri sii socon doona, waxa Madaxweynaha iyo Wafdigiisu ay ku soo bandhigi doonaan halkaas, aragtida Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ku aaddan mustaqbalka Qaaradda Afrika iyo dadaalada Soomaaliya ee ku wajahan la dagaallanka argagixisada, ka soo kabashada saamaynta COVID-19, wax ka qabashada fatahaadaha, ka gaashaamashada abaaraha, la dagaallanka ayaxa, iyo arrimo kale oo quseeya Soomaaliya iyo Qaaradda Afrika.